Zvivakwa uye Real Estate Transaction | Eindhoven & Amsterdam
Zvivakwa uye Real Estate Transaction
Isu tinoshinga kupa zano kune vatengi veDutch uye vepasi rese vanoisa mari munzvimbo dzakasiyana siyana dzeNetherlands, dzakadai sehotera, nzvimbo dzekutamira, zvirongwa zvekutengesa uye nzvimbo dzekugara.
Mutemo wekutengesa zvivakwa unosanganisira zvese zviri pamutemo zvine chekuita nepfuma isingazungunusike. We at Law & More unokwanisa kukubatsira nezano repamutemo kana mibvunzo kana mhirizhonga ikamuka nezvekutenga nekutengesa kwezvinhu zvisingazununguke. Pamusoro peizvozvo tinogona kukupa iwe mazano epamutemo pane munda wemitero.
Uyezve, ivo maDutch uye vatengi vepasi rese vatengi ve Law & More vari kubatsirwa uye kurayiridzwa kurongedza avo eDutch uye epasi rose zvivakwa dzimba nenzira yakanyanya mutero nzira vachishandisa nzira yakawanda yekutonga. Unyanzvi hwedu hunosvika kubva pakutorwa kwefurati rekushandisa rakazvimiririra kutaurirana mune dzakaoma kutengeserana zvivakwa uye zvivakwa dzimba zvibvumirano.
Law & More inobatsira vese varidzi uye varidzi vepamba pakudzivirira nekupedza matambudziko ari pamutemo. Zvakare pamwe chete nemubhadharo weimba yekutandarira pamwe nerenda rezvivakwa zvechitoro uye zvehofisi chivakwa. Varidzi uye varidzi vepamba vane zvakakosha zvemitemo zvisungo. Izvi zvine hunhu hunodzora zvinoreva kuti mapato anogona kuvatsiva iwo zvibvumirano zvako. Uye zvakare, pane zvekumanikidzwa zvinodiwa mukati memutemo werenda. Mumwe haakwanise kusiyana nemirau iyi, iyo inotarisira kuchengetedza muridzi sezvo iri bato risina kusimba, muchibvumirano. Kana iwe uchinge wakamira mune imwe mamiriro umo mumwe wako asingateereri nezvibvumirano zvake, pane zvinoverengeka zviito zvinogona kuedzwa. Mune zviitiko zvakadaro unogona kuvimba nesu nekukupa iwe zano repamutemo raunoda.
• kunyorwa kwechibvumirano chekurenda kana uri muridzi wemba
• kupokana pamusoro petsananguro yesungano
• kutora matanho kana muridzi kana muridzi wemba asingaite maererano nezvibvumirano zvakaitwa
• kupera kwechibvumirano chekurenda